En vente actuellement 13/11/2018
Maska natoraly 2, mampalama sy manatsotra volo ho azy!
Maro ireo vehivavy tsy dia tia mampiasa akora simika amin’ny volo ka tsy roboka loatra amin’ireny “produits lisseurs” ireny. Ireo manana karazam-bolo marefo kosa dia tsy mahasahy loatra intsony mampiasa “fer à lisser” sy “brushing”. Ireto misy torohevitra zato isan-jato natoraly mampitsotra ny volo sady manatsara azy.
Victoria’s Secret : Iray tapitrisa dolara ny vidin’ny atin’akanjo iray
Ilay mpilatro Elsa Hosk no nisalotra voalohany an’ ilay atin’akanjo “Fantasy Bra” tamin’ity taona ity. Hisy amin’izy ity no azo jifain’ny besinimaro, izay voalohany teo amin’ny tantaran’ny “Victoria’s Secret”.
Shopping « Robes de cérémonies »
Robe grenat à col montant. Prix : 45.000Ar « Sur commande » Boutique en ligne Facebook "Tendance Secret" cont: 0331234992- 0346965874
Savaranonando, azo atao tsisy tanana !
Tsy ny vehivavy ihany akory no mila an’ilay savaranonando, fotoana natao hanaingana ny filàna sy hampiakatra tsara ny mari-pana, mialohan’ny tena firaisana ara-nofo.
Navotsitr’ireo mpaka an-keriny ireo ankizy mpianatra miisa 79 tany Cameroun
Ankizy mpianatra miisa 79 no navotsitr’ireo mpaka an-keriny tany amin’ny faritra avaratr’andrefan’i Cameroun, ny alarobia lasa teo.
Mpangalatra iray, voasambotra tao anatin’ny torimasony tany Angletera
Hafa kely ny fomba nahatratra an’ity mpangalatra iray tao Folkestone, tanàna kely iray ao atsimo atsinanan’i Angletera.
Notoriany ny olon-tiany fa nanimba ny fivaviany
Nametraka fitoriana teny amin’ny fitsarana ity vehivavy iray 29 taona, rehefa simba tanteraka ny fivaviany.
Misy olona miaraka amiko efa ho 1 taona izao, nefa misy vehivavy hafa ihany koa efa niaraka taminy talohako. Inona no ataoko ?
Ny fanontaniana voalohany dia tokony apetrakao amin’ny tenanao ihany : “Inona no tanjoko miaraka aminy ?”.
“Cornichon” : Mampitsahatra “crampe”, aretin-tenda …
Manome tsiro miavaka ho an’ny nahandro ny “cornichon” , izay somary maharikivy am-bava. Tena ilaina tokoa ny mitahiry “cornichon” ao an-trano ao, satria mampitony ny karazana fikorontanan’ny vatana toy ny aretim-bavony, ny areti-tenda, ny aretin-kozatra izy ireny…
Antony 7 tokony hisotroana ranona betiravy
Sady miaro amin’ny otrikaretina no manadio ny ao anaty ny jus vita avy amin’ny betiravy. Maro ny antony mahatsara ny fisotroana azy, izay tanisaina aminao eto.
« A ceux qui osent, rien n'est impossible »
Matetika dia ireo olona manana toetra be fikirizana, tia manandrana sy tsy mifantoka be loatra amin’ny ampitso no tody amin’ny tanjona iriany.